၂၀၂၁ မှာ ကြည့်ရှုရတော့မယ့် ကိုရီးယားဒရာမာ (၁၀)ခု - Chelmo News Portal
Home›Exclusive›၂၀၂၁ မှာ ကြည့်ရှုရတော့မယ့် ကိုရီးယားဒရာမာ (၁၀)ခု
၂၀၂၀ မှာ Covid-19 ကြောင့် ရိုက်ကူးရေးတွေရပ်ထားရတာတွေလည်းရှိတော့ နှစ်သစ်မှာ ကြည့်ရမယ့် ဇာတ်ကားတွေပိုများသွားပြီနော်။ မင်မင်က ၂၀၂၁ မှာကြည့်ရမယ် K-Dramas နံမည်တွေကို တစုတစည်းတည်းတင်ပေးလိုက်တယ်နော်။ကဲ..နှစ်သစ်မှာ စိတ်သစ်လူသစ်နဲ့ K-Dramas အသစ်တွေကြည့်ကြစို့။
ဒီဇာတ်ကားရဲ့ အဓိက သရုပ်ဆောင်တွေအဖြစ် K-Drama ချစ်သူတွေနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တဲ့ မင်းသား Jung Hae In နဲ့ မင်းသမီးကတော့ BLACKPINK အဖွဲ့ဝင် Jisoo တို့က ပါဝင်သရုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Jisoo ရဲ့ ပထမဆုံးပွဲဦးထွက်ဇာတ်ကားလည်း ဖြစ်ပါတယ်နော်။ ဒီဒရာမာကိုတော့ မေလလောက်မှာထွက်နိုင်တယ်လို့ ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။ အာပေးဖို့ အဆင်သင့်ပဲမလား?
ဒီဇာတ်ကားကတော့ Korean Highschool Zombie series ဖြစ်ပြီး webtoon ကို အခြေခံပြီး ပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကသရုပ်ဆောင်တွေအဖြစ် Yoon Chan-young နဲ့
Park Ji-hoo တို့ကပါဝင်ထားပါတယ်။ ၂၀၂၁ ဇွန်လလောက်မှာ ထွက်နိုင်ခြေရှိတယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကားမှာဆိုရင်တော့ တရားမျှတမှုကိုရှာဖွေနေတဲ့ ရဲအရာရှိသစ်တစ်ယောက် နဲ့ ရက်ရက်စက်စက်သတ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့် တစ်နိုင်ငံလုံးကို ပရမ်းပတာဖြစ်စေတဲ့ serial killer တို့ရဲ့အကြောင်းတွေကိုကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပြီး Lee Seung Gi နဲ့ Lee Hee Joon တို့က အဓိကပါဝင်ထားပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပြီး သရုပ်ဆောင်တွေကလည်း အမိုက်စားတွေဆိုတော့ ကြည့်သင့်တဲ့ဇာတ်ကားတစ်ကားပါနော်။ ဒီဇာတ်ကားကို ၂၀၂၁ ဖေဖော်ဝါရီမှာ ထွက်နိုင်တယ်လို့ ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကားကလည်း webtoon ကို အခြေခံထားပြီး SF9 အဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်တဲ့ Extraordinary You ထဲကမင်းသားချောလေး Rowoon နဲ့ မင်းသမီး Won Jin Ah တို့ပါဝင်ထားပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကားမှာတော့ Ji Sung နဲ့ GOT7 အဖွဲ့ဝင် Jinyoung တို့က အဓိကပါဝင်ထားပြီး ဒီဇာတ်ကားထဲမှာဆိုရင်တော့ Jinyoung ဟာ ကလေးဘဝမှာ မတော်တဆမှုတစ်ခုကြောင့် မိဘတွေကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ Jury အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့သူငယ်ချင်းအကူအညီနဲ့ Ji Sung ရဲ့လက်အောက်မှာတွဲဖက်တရားသူကြီးဖြစ်အောင်ကြိုးစားတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်အဖြစ်မြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားကိုတော့ ဇွန်လမှာထွက်နိုင်တယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
6. Cliffhanger (Mount Jiri)
လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ပြီး စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းတဲ့ ဒရာမာဖြစ်ပြီး Jiri တောင်တန်းမှာရှိတဲ့ လူတွေကိုကယ်ဆယ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့ Park Rangers တွေအကြောင်းကိုပုံဖော်ရိုက်ကူးထားပါတယ်။
Kdrama လောကမှာကြေးအမြင့်ဆုံးမင်းသမီးဖြစ်တဲ့ Jun Ji Hyun နဲ့ မင်းသား Joo Ji Hoon တို့ကအဓိကပါဝင်ထားပါတယ်။ ဒီဒရာမာကိုတော့ ၂၀၂၁ ရဲ့ နှစ်ဝက်လောက်မှာ ထွက်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
7. Youth (BTS-inspired K-Drama)
ဒီဒရာမာကတော့ လက်ရှိ K-pop လောကမှာအအောင်မြင်ဆုံးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ BTS အဖွဲ့ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်ခုနှစ်ယောက်ရဲ့ ဖြစ်သန်းလာခဲ့ရတဲ့ ခက်ခဲမှုတွေ၊ နာကျင်မှုတွေ နဲ့ အဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းဘယ်လိုဖေးမကူညီပြီး ဒီလိုအောင်မြင်မှုတွေပိုင်ဆိုင်လာအောင် ဘယ်လိုကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့ကြလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကို မင်းသားခုနှစ်ယောက်နဲ့ ပုံဖော်ရိုက်ကူးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Pyeonggang နဲ့ On Dal တို့ရဲ့ ဂန္ဓဝင်အချစ်ဇာတ်လမ်းကို ပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Historical romance ဒရာမာဖြစ်ပြီး On Dal အဖြစ် Ji Soo နဲ့ Pyeonggang အဖြစ် Kim So Hyun တို့က အဓိကပါဝင်ထားပါတယ်။
9. One Day, Destruction Came to My Front Door
ဒီဒရာမှာဆိုရင်တော့ Seo In Guk နဲ့ Park Bo Young တို့က အဓိကပါဝင်ထားပြီး Lee Soo Hyuk, Kang Tae Oh နဲ့ SF9 အဖွဲ့ဝင် Dawon တို့ကလည်းပါဝင်ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားပါတယ်။ ဒီဒရာမာကိုတော့ မေလလောက်မှာထွက်နိုင်ခြေရှိတယ်လို့ ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။ ကဲ…Park Bo Young ကိုလွမ်းနေတဲ့သူတွေ ကြည်ဖို့ ready ပဲလား?
နိုင်ငံခြားပရိတ်သတ်တော်တော်များများကတော့ ဒီဒရာမာဟာ BTS အဖွဲ့ဝင် V ရဲ့ အကြိုက်ဆုံးတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ webtoon အကြောင်းလို့လေ့လာတွေ့ရှိထားကြပါတယ်။
ဒီဇာတ်လမ်းကတော့ အသက် ၇၀ အရွယ် ballet ကိုချစ်တဲ့ Deok Chul (Park In Hwan) နဲ့ ၂၃ နှစ်အရွယ် Ballerina ဖြစ်တဲ့ Chae Rok (Song Kang) တို့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ပတ်အတွင်း တရုတ်နိုင်ငံမှာ လူကြိုက်အများဆုံး ကိုရီးယားအနုပညာရှင် ၁၅ ယောက်